Moisturizing Anti-allergy Anti Wrinkle Brightening Carrot Face Cream For Dry skin Custom - နှုတ်ခမ်း | မျက်စိ Cream| facial မျက်နှာဖုံး |L ကို Otion | facial Cream | မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ OEM / လိမ္မော်ရောင်, လက်ကားအရောင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » Moisturizing Anti-allergy Anti Wrinkle Brightening Carrot Face Cream For Dry skin Custom
ထုတ်ကုန်အမည်: Carrot face cream လြှောကျလှာ: Face/body
အသားတင်အလေးချိန်: 1kg,2kg or customized ပုံစံ: မုန့်
Skin Type: Sensitive, Dry အချိန်အသုံးပြု: နေ့
မူလအစရာ: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်နိုင်ငံ ပါဝင်သောအရာ: ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ
အသက်အရွယ်အုပ်စု: အရွယ်ရောက်သူ လက္ခဏာ: အာဟာရဖြစ်စေသော, Anti-wrinkle, moisturizer
မော်ဒယ်နံပါတ်: J-CRM အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ: Carotene, olive oil , vitamin E,carrot seed oil
MOQ:3အပိုင်းပိုင်း Note: This product will not be returned once sold.
Supply နိုင်ခြင်း: 1000 Kilogram/Kilograms per Day ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် 1KG/bottle;သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ဆိပ်ကမ်း Foshan port Guangzhou port ကြာမြင့်ချိန် Within 15 days after payment is made
အင်္ဂါရပ်များ It can effectively dry and fine lines to increase skin elasticity and improve skin tone. It hasastrong moisturizing effect.
OEM / လိမ္မော်ရောင် ：receive free samples, free to visit factory, free skin care guidance, get professional advanced formula ， high quality raw materials, international safety production standards
Form ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်အပေါ်အခြေခံထားတယ် ” ဘေးကင်း,ပိုပြီးပြုပြင်,အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအပေါ်အလွန်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောအရည်အသွေးကိုရှာဖွေခြင်း 100 % မူရင်းဂေဟစနစ်ပစ္စည်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်, ကုန်ကြမ်းပုံသေနည်း, အရည်အသွေးအစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု, ထုတ်ကုန်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အလှအပပြုပြင်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာအလှပြင်ပြုပြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စနစ်တကျသုတေသနစစ်ဆေးမှု၏အခြားရှုထောင့်များ.